Madaxweyne Farmaajo oo daah-furay Barnaamijka Baxnaano ee lagu taakuleynayo Qoysaska danta yar……………………………………. | CityFm
Home Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo oo daah-furay Barnaamijka Baxnaano ee lagu taakuleynayo Qoysaska danta yar…………………………………….
Madaxweyne Farmaajo oo daah-furay Barnaamijka Baxnaano ee lagu taakuleynayo Qoysaska danta yar…………………………………….
“Waxaa inoo diyaarsan Qorshaha Horumarinta Qaran ee 9aad oo si faahfaahsan u qeexaya qorshaha aan ku wajahayno saboolnimada, cunta yarida, annagoo xoogga saareyna kor u qaadidda nolasha dadka u nugul xaaladaha deg-deg ah sida abaaraha, duufaannada, cudurrada iyo guud ahaan musiibooyinka dabiiciga ah ee ina soo food saara.
”Madaxweyne Farmaajo ayaa faray Xukuumadda, gaar ahaan Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshda oo hoggaamineysa Barnaamijka Baxnaano in si daah-furan oo hufnaan iyo cadaalad ah ay ku fuliso Barnaamijkan, iyada oo daryeelaysa qoysaskan danyarta ah ilaa ay ka gaarsiineyso heer isku filnaansho nololeed oo ay iskood u maareyn karaan nolashooda, si wejiyada xiga ee Barnaamijka Baxnaano loogu sii baahiyo Malaayiin kale oo ka mid ah shacabkeenna Soomaaliyeed oo u ooman adeegyada dowladeed.
Previous articleMaamulka degmada Buulo-burte oo billaabay olole wacyigelin ah oo looga hortegayo COVID19
Next articleWasaarada Beeraha iyo Waraabka Hirshabelle ayaa kadigeysa Fatahaad kadhalan karta Wabiga Shabelle….